गीत संगीत सुनेर मान्छे सुध्रिने र बिग्रने हो र ? – ebaglung.com
गीत संगीत सुनेर मान्छे सुध्रिने र बिग्रने हो र ?
२०७६ कार्तिक ९, शनिबार १२:३३	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध
गीत संगीतले कसैलाई तत्काल सुधार गर्छ वा बिगार गर्छ भन्ने कुरामा मलाई उतिसारो विश्वास लाग्दैन । गीत संगीत भनेको मनोरञ्जनको लागि हो भने अर्को तर्र्फ कला संस्कृतिको जगेर्ना पनि हो । कुनै उत्ताउलो पाराको गीत संगीत सुनेर मान्छे तत्काल बिग्रने र सभ्य तरिकाको गीत सुनेर सुुध्रने भन्ने कुरामा त्यती तुक देखिन्न । अस्ती भरखर कलाकार दुर्गेश थापा बियरको प्रचार सहितको भड्कीलोे गीत गाएको भन्दै पक्राउ गरी त्यो गीत युटुुब बाट हटाउने शर्त अनुसार रिहा भए । हुनत मेले दुर्गेश थापालाई नजिक बाट चिन्दिन र नचिनेको मान्छे संग बोल्ने त झन कुरैै भएन । उनको बाह्य प्रस्तुति र ब्यक्तित्व हेर्र्दा मेरो दृष्टिमा उनि निष्कपट निष्पक्ष र छलछाम नभएका कलाकार हुन् । चाकडी चाप्लुसी र कसैको प्रशंसक बन्ने चाहना दुर्गेशमा खासै पाईदैन ।
यो संसारमा धेरैखाले मान्छे छन् । उमेरको प्रभाव रुचिको बिषयले धेरै कुराको निर्धारण गर्दछ । कलिलो उमेरको हुनुले पनि उनका प्रस्तुतिहरुमा केही उत्ताउलो पन त देखिन्छनै । दुर्गेसको देउसीभैलो गीतमा बियरको प्यापक प्रचार गरेजस्तो पनि देखिन्छ । त्यस्तै गाजां खानुपर्छ भन्ने शब्द समेत समेटेका रहेछन् । उनको प्रस्तुतीमा व्यापक उछृृङ्गखलता नभएको होईन । तर कला संगीत साहित्यमा थोरै ट्याक छोडिन्छनै । यसो भन्दैमा कलाकारलाई नियन्त्रणमैै लिएर निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने छैन । कि त कलाकारितामा यो भन्दा बढी जान नपाईने भनेर राज्यले एउटा सिमा निर्धारण गर्नुपर्यो नत्र केही फरक प्रस्तुती आयो भन्दैमा गीत संगीतलाई बन्देजनै लगाउने कुरा त्यती सान्दर्भिक होला जस्तो लाग्दैन । यदी त्यसो हो भने बिभिन्न स्थानमा हुने हरेक मेला महोत्सव रोक्नुपर्दछ । निकै सभ्य र भद्रभलाद्मी भनाउदा ब्यक्तिहरु पनि अनेकखाले बिकृति र बिसंगती तर्फ फसेका छन् ।
नेपालमा ठुलो मात्रामा मदिराजन्य पदार्थको बिक्रिवितरण हुन्छ । ठुला ब्राण्डमा मदिराजयन्य पदार्थ सेवनमा यो मुलुकका ठुलाबडा सुकिलामुकिलानै धेरै संलग्न भएका दृष्यहरु देखिन्छन् । धुम्र्रपान तथा अन्य लागु पदार्थको पनि खुलेआम बिक्रि वितरण हुन्छ । यसतर्फ कसैको ध्यान जादैेन । दाईलाई सक्दिन भाउजुलाई राख्दिन भने जस्तो भरखर पलाउदै गरेका कलाक्षेत्रका मुनाहरु भाँच्न खोज्नु त्यती उचित देखिन्न । त्यस्तै भरखर मात्र अर्का र्याप कलाकार समिर घिसिङ भिटेन पनि अभद्र गीत गएको आरोपमा बिबादमा तानिए । भिटेनलाई पनि पक्राउ पछि तारिफमा छाडियो । उनले पनि र्याप मार्फत ठुलो संख्यामा युवाहरुको मन जित्न सफल भएका छन् । कुनैपनि मान्छेको कला हेरेर नियन्त्रण गरिनु त्यती उचित नहोला । उसको चरित्र र सामाजिक क्रियाकलाप हेरेर र प्रस्तुति हेरेर बिश्लेषण हुनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ । बाहिरी रुपमा अत्यन्त राम्रा लाग्नेहरु पनि भित्री रुपमा धेरै तल्लो स्तर सम्म गिरेका उदाहरण पनि तपाई हाम्रो सामु प्रसस्त छन् ।
कलाकारिता क्षेत्र पनि त्यस्तै देखिन्छ । यदी कुनैपनि कलाकारको पर्दशन वा गितसंगित मन पर्दैन भने राज्यले आफै बोलाएर छलफल गरेर हटाउने काम गर्दा राम्रो होला । अर्को कुरा जुन अहिलेको प्रविधि युक्त दुनियामा युटुब बाट हटाउनु भन्दैमा यसको नियन्त्रण वा फैलावटनै रोकिन्छ भन्ने हुदैैन । जुुन चिजलाई लुकाउन वा नियन्त्रण गर्न खोजिन्छ त्यही चिज झन शक्तिशाली बनेर आउछ । जुुनसुुकै व्यवसायको पनि कारोबार गर्दा सबैले नाफा खोज्ने गर्दछन् त्यस्तै गीतसंगीत पनि एउटा ब्यापारनै हो । यसमा पनि कलाकारले नाफाघाटाको हिसाब किताव अवस्य राख्छन् जसले गर्दा बिकाउ हुने सृजना निर्माण गर्छन् ।
त्यसो त कलाकारले पनि सभ्य र शालिन सृजना निर्माण तथा प्रस्तुतीले पनि आम जनताको मन जित्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्नुपर्यो । केही कलाकारका छाडा प्र्रस्तुती र पर्दशनले सिङ्गो कला क्षेत्रमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । बिकाउको हिसाबले धेरै छाडा बन्नु राम्रो होईन । बिभिन्न मेला महोत्सवमा उनै कलाकार संग पिठ्यु ठोक्काई ठोक्काई नाच्ने मन्न्त्रि देखी नेता र अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरु प्नि छन् । अतं राज्यले पनि गीत संगित भनेकोे ब्यक्ति विशेषमा हुने कला हो र यसले कही न कही केहीन केही ट्याक छोड्छ भनेर बुझ्नु पर्यो र कलाकारले पनि सकेसम्म मर्यादित र शिष्ट भाषामा ध्यान दिन सक्यो भने यस्ताखाले समस्या आउदैनन् । कलाकारका प्रस्तुति सबैलाई मनपर्छन्नै भन्ने छैन । सबै सबैका लागि राम्रो बन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । हरेक कुरा समय सान्दर्भीक हुन्छ । रक्सी भाङ्ग चुरोट गाजां खानुपर्छ भनेर गीत गाउनेलाई समात्नु भन्दा पनि खानेहरुलाईनै समात्न सकियो भने समाज सकरात्मक दिशा तर्फ अगाडी बढ्ने छ ।
लेखिका सन्चारकर्मी हुन् ।
२०७६ कात्तिक ९ ।
मिलेर राणा शसन फाल्यौं, पञ्चायत फाल्यौं, संविधान बनायौं अब सम्वृद्धिमा अगाडी बढदै छौ – सांसद पौडेल
धर्मबहादुर थापा : गुल्मीको पहिलो स्थानिय विकास अधिकारी देखि गृहमन्त्री सम्म !